जब हर्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ हामीमा यस्ता फरकहरु देखिन्छ - E-BreakingNews
Home Jibanshaili जब हर्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ हामीमा यस्ता फरकहरु देखिन्छ
जब हर्मोनको सन्तुलन बिग्रन्छ हामीमा यस्ता फरकहरु देखिन्छ
हार्मोन भनेको के हो?
कुनै कोष वा ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने रसायन हो जसले शरीरको अरु भागमा रहेका कोषहरुलाई असर समेत गर्ने गर्छ । शरीरको मेटाबोलिज्म र रोग प्रतिरोधक प्रणालीमा हार्मोनको सिधै असर हुन्छ ।चिकित्सकका अनुसार शरीरमा कुनै हर्मोन धेरै बढी वा धेरै कम हुनु नै हर्मोनको असन्तुलन हो ।
अहिलेको व्यस्त दिनचर्या, असन्तुलित जीवनशैली, अस्वस्थ्यकर खानपान, प्रदूषण, मानसिक तनावले पछिल्लो दशक हर्मोनल असन्तुलनको ग्राफ एकदमै तिब्र रुपमा बढेको छ ।
पोषिलो एवं स्वस्थ्यकर खानपान, सक्रिय दिनचर्या, सकारात्मक सोंच आदिले यसमा खास भूमिका खेल्छ । अर्थात खराब खानपान र दिनचर्या परिवर्तन गरेर हर्मोनलाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ । मदिरापान नगर्ने, धेरै मसलेदार वा अवस्थ्यकर खानेकुरा नखाने, ऐशआरमपूर्ण जीवन नखोज्ने, चिन्ता एवं तनाव नलिने ।
पर्याप्त निद्रा लिने । सन्तुलित जीवनशैली, खानपान र सोंचबाट हर्मोनलाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ । गहिरो निद्राले मस्तिस्क र एड्रिनल ग्रन्थीको माध्यमले हार्मोन सन्तुलित हुन्छ । हार्मोन असन्तुलनको कारण देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुलाई कम गर्नको लागि प्रतिदिन आठघन्टा सुत्ने लक्ष्य बनाउनुपर्छ ।
किन हुन्छ असन्तुलन?
हार्मोन असन्तुलनको एक मात्र नभई तेहा धेरै कारण रहेको पाइन्छन। जस्तो, खराब जीवनशैली, पोषणको कमी, व्यायाम नगर्ने, गलत खानपान, अत्यधिक तनाव वा उमेर आदि । महिला र पुरुष दुवैमा हार्मोन असन्तुलनको फरक फरक प्रभावहरु हुन्छन् ।
पछिल्लो दिन विश्व स्वस्थ्य संगठनले मानसिक स्वास्थ्यको घट्दो स्तरलाई लिएर चिन्ताजनक आंकडा दिएको थियो । अहिले धेरैजसो मानिस दिमागमा चिन्ता र तनाव बोकेर बाचिरहेका छन् । उनीहरु कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यसको पछाडि असन्तुलित हर्मोन नै जिम्मेवार देखिएको छ ।
यो पनि, कसरी कोरोना-भाइरस सङ्क्रमण हुन्छ ? कोरोनाभाइरस नाक र मुखबाट मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनेहरू मानिसलाई उक्त भाइरस सर्न सक्छ।
सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा नाक र मुखबाट निस्किएका ससाना छिटामा कोरोनाभाइरस सर्छ ।
सङ्क्रमित व्यक्तिले सरसामान वा सतह छोएर हात नधोई आफ्नो अनुहार छुँदा कोरोनाभाइरस शरीरमा सर्न सक्छ।
भाइरसले पहिला घाँटी, सासनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गर्छ। बिस्तारै ती अङ्गलाई कोरोनाभाइरसहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्न थाल्छन् र गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छन्।रासस